Tyre Valves များ
Rubber Valves များ
Tyre Stud သေနတ်များနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ပြုပြင်ရေး ကိရိယာများနှင့် ပစ္စည်းများ
Tyre Pressure Gauges များ
Tyre Valve ကိရိယာများ
လုံခြုံရေး ပင်နံပါတ်ပါသော Jack Stand
Wheel Lug Nuts နှင့် Bolts
BULGE ACORN ပုံစံ
DUALIE ACORN ပုံစံ
MG-ATTACHED WASHER ပုံစံ
Office VR မြင်ကွင်း
Tyre Valve Air ယိုစိမ့်မှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
admin မှ 22-05-07 ရက်နေ့တွင်
တာယာအဆို့ရှင်သည် ကားတာယာတစ်ခုတွင် အလွန်သေးငယ်သော်လည်း အလွန်အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အဆို့ရှင်၏ အရည်အသွေးသည် မောင်းနှင်မှုဘေးကင်းရေးကို ထိခိုက်နိုင်သည်။တာယာယိုစိမ့်ပါက လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု တိုးလာကာ တာယာပေါက်ထွက်နိုင်ခြေကို တိုးစေကာ ခရီးသည်များ၏ ဘေးကင်းရေးကို ထိခိုက်နိုင်သည်...
Tyre Valve ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ Tyre Valve ရဲ့ ပုံစံ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။အရည်အသွေးကို ဘယ်လိုပြောရမလဲ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း မြေနဲ့ထိတွေ့တဲ့ မော်တော်ကားရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အစိတ်အပိုင်းကတော့ တာယာပါ။တာယာများသည် အမှန်တကယ်တွင် တာယာကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်နှင့် ယာဉ်၏အလားအလာကို ရောက်ရှိစေရန်အတွက် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။တာယာသည် ကားတစ်စီးအတွက် အရေးပါသော...
သင့်ကား တာယာကို လမ်းမပေါ်တွင် မတိုက်မီ ဟန်ချက်ညီသင့်ပါသလား။
တာယာသည် လှိမ့်သည့်အခါ ဟန်ချက်ညီသော အနေအထားတွင် မရှိပါက၊ အရှိန်ပြင်းပြင်း မောင်းနှင်သောအခါတွင် ၎င်းကို ခံစားနိုင်သည်။အဓိက ခံစားချက်ကတော့ စတီယာရင်ဘီးလှုပ်ခြင်းမှာ ရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ ဘီးက ပုံမှန်ခုန်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်၊ အနိမ့်အမြန်နှုန်းနဲ့ မောင်းနှင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုက သေးငယ်ပြီး p...
Floor Jack - သင့်ကားဂိုဒေါင်ရှိ သင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကူအညီပေးသူ
Car Jack Stand သည် DIYer ၏ ကားဂိုဒေါင်အတွက် အတော်လေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်၊ ဤကိရိယာ၏အကူအညီဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းကို အမှန်တကယ် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ကြီးကြီးနှင့်အသေးအလုပ်များအတွက် ကြမ်းပြင်ပေါက်များသည် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားများစွာရှိသည်။တာယာအပိုတာယာကို ကတ်ကြေးအပေါက်နဲ့ ဆွဲချနိုင်ပါတယ်...
ကားတာယာများ၏ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု အကြံဉာဏ်များ မဖြစ်ပွားမီ ပြဿနာများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။
တာယာသည် ကား၏ခြေရင်းကဲ့သို့ မြေပြင်နှင့် ထိတွေ့သည့် တစ်ခုတည်းသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး ကား၏ ပုံမှန်မောင်းနှင်မှုနှင့် မောင်းနှင်မှုဘေးကင်းရေးတို့အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။သို့သော် နေ့စဉ် ကားအသုံးပြုမှုတွင် ကားပိုင်ရှင်အများစုသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လျစ်လျူရှုကြလိမ့်မည်...
TPMS အာရုံခံကိရိယာ – ယာဉ်ပေါ်တွင် လျစ်လျူရှု၍မရသော အစိတ်အပိုင်းများ
TPMS သည် တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို ကိုယ်စားပြုပြီး သင့်ဘီးတစ်ခုစီတွင် ပါ၀င်သည့် အာရုံခံကိရိယာငယ်များပါရှိပြီး ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်မည့်အရာမှာ သင့်ကားအား တာယာတစ်ခုစီ၏ လက်ရှိပေါင်ချိန်ကို ပြောပြမည်ဖြစ်သည်။အခုဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းရင်းက ဟား...
Studded Tyre သို့မဟုတ် Studless Tyre ?
ဆောင်းရာသီတွင် အေးပြီး နှင်းထူထပ်သော နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သော အချို့ကားပိုင်ရှင်များအတွက်၊ ဆောင်းရာသီရောက်သောအခါတွင် ကိုင်ဆောင်မှုပိုမိုအားကောင်းစေရန် ကားပိုင်ရှင်များသည် နှင်းများထူထပ်သောလမ်းများပေါ်တွင် ပုံမှန်အတိုင်းမောင်းနှင်နိုင်ရန် ၎င်းတို့၏တာယာများကို လဲလှယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ဒီတော့ နှင်းတာယာနဲ့ ရိုးရိုးတာယာကြားက ဘာကွာလဲ..။
သင်၏ တာယာ valves များကို ဂရုပြုပါ။
21-10-06 တွင် admin မှ
ကား၏ တစ်ခုတည်းသော အစိတ်အပိုင်းမှာ မြေပြင်နှင့် ထိတွေ့သောကြောင့်၊ ယာဉ်၏ ဘေးကင်းမှုအတွက် တာယာများ၏ အရေးပါမှုကို ကိုယ်တိုင် သက်သေပြပါသည်။တာယာတစ်ခုအတွက်၊ သရဖူ၊ ခါးပတ်အလွှာ၊ ကန့်လန့်ကာအလွှာနှင့် အတွင်းပိုင်းအလွှာများအပြင် ခိုင်မာသောအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတည်ဆောက်ရန်အတွက်၊ နှိမ့်ချသောအဆို့ရှင်သည် ပြိုလဲသွားသည်ဟု သင်ထင်ဖူးပါသလား။
wheel balance weight ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က ဘာလဲ။ဘီးချိန်ခွင်လျှာအလေးချိန်သည် မော်တော်ကားဘီးဗဟို၏ မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။တာယာပေါ်တွင် ဘီးအလေးချိန် တပ်ဆင်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရှိန်မြင့်ရွေ့လျားမှုအောက်တွင် တာယာတုန်ခါခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အကာအရံများ ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
တာယာပြားပါရှိသော ကားဘီးကို အစားထိုးနည်း
21-07-12 ရက်နေ့တွင် admin မှ
အကယ်၍ သင်သည် လမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေပြီး တာယာကွဲသွားပါက သို့မဟုတ် ထိုးဖောက်ပြီးနောက် အနီးဆုံးကားဂိုဒေါင်သို့ မမောင်းနှင်နိုင်ပါက စိတ်မပူပါနှင့်၊ အကူအညီရယူရန် စိတ်မပူပါနှင့်။အများအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကားတွင် တာယာအပိုများနှင့် ကိရိယာများရှိသည်။ဒီနေ့တော့ ကားအပိုတာယာကို ကိုယ်တိုင်ပြောင်းနည်းလေး ပြောပြမယ်နော်။1. ပထမဦးစွာ သင်...
လိပ်စာ-7/f၊ No.19 Jiangxia လမ်း၊ Haishu ခရိုင်၊ Ningbo၊ တရုတ်နိုင်ငံ